समाज – Page 44 – Hamropati.com
Home»समाज (Page 44)
चितवनको खैरहनी न. पा.-१२ धरमपुरमा धार्मिक चहलपहल
By on March 14, 2016 धर्म दर्शन, प्रमुख समाचार, समाज
सरोज प्रसाद रिमाल चितवन स्वो. लोक प्रसाद बराकोटी द्वारा वि सं २०३७ सालमा स्थापित श्री धर्मेस्वर शिव मन्दिरको प्रांगण मा करिब ४ लाख लगानीमा सतहल निर्माण तथा मन्दिरलाई पुन निर्माण गरियको छ ।खैरहनी न. पा.-१२ धरमपुर ,चितवनमा रहेको मन्दिरमा प्रत्यक महिनाको ६ गते विषेस हरिकिर्तन गरिदै आयको छ । साथै बार्षिक रुपमा बाला चतुर्दशी र […]
आजदेखि राजधानीमा हाइटेक मेट्रो बस सञ्चालन
By on March 13, 2016 प्रमुख समाचार, प्रविधी, समाज
३० फागुन, काठमाडौं । आजबाट राजधानीका सडकमा हाइटेक मेट्रो बस कुद्ने भएका छन् । महानगर यातायात प्रालिले नेपालमै पहिलोपटक अत्याधुनिक प्रविधि जडित हाइटेक मेट्रो सेवा सुरु गर्न लागेको हो । हाइटेक बस सञ्चालन भएसँगै सकसपूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई केही मात्रामा भए पनि सहज, सुरक्षित, आनन्ददायी र मनोरञ्जनात्मक हुने भएको छ । यसले सेवा दिन थालेपछि सार्वजनिक […]
छोरी-ज्वाइँको घर आएकी शान्ताको जलेर मृत्यु
By on March 13, 2016 अपराध, समाज
३० फागुन, रामेछाप । रामेछापको मन्थली नगरपालिका १४ भटौलीमा एक महिलाको घर भित्रै जलेर मृत्यु भएको छ । शनिबार राति जीतबहादुर सार्कीको घरमा आगलागि हुँदा उनकी सासु ८२ वर्षीया शान्तामाया सार्कीको जलेर मृत्यु भएको स्थानीय छत्र मुग्रातीले जानकारी दिए । छोरी-ज्वाइँको घरमा बस्दै आएकी सार्की राति घरमा एक्लै सुतेकी थिइन् । छोरी-ज्वाइँ भने नजिकैको गोठमा […]
फिजिसियन डाक्टरहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा
By on March 11, 2016 पत्रपत्रिका, प्रमुख समाचार, समाज
चितवन, २८ फागुन । दीर्घकालिन रुपमा बिग्रेको मृगौलालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा विज्ञ चिकित्सकहरु सहभागी दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा सुरु भएको छ । “सुरक्षित मृगौला, सुरक्षित जीवन” भन्ने नारासहित अन्तराष्ट्रिय मृगौला दिवस अवसर पारेर फिजिसियन विशेषज्ञ डाक्टरहरु सहभागी सम्मेलन सुरु भएको हो । सोसाईटी अफ ईन्टरनेशनल मेडिसिन अफ नेपालको आयोजना भएको सम्मेलनको सोसाइटीका […]
बुढीगण्डकी बनाउन चीनसँग सहुलियत ऋण माग्ने प्रस्ताब
By on March 11, 2016 प्रमुख समाचार, समाज
२८ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन सहुलियत ऋण माग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।बुढीगण्डकीमा चिनीयाँ लगानी भित्र्याउने प्रस्ताव गर्न उर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो । ‘बुढीगण्डकी, किमाथांका अरुण, सुनकोशी तेस्रोलगायतका आयोजनाहरुमा चिनीयाँ लगानी तथा सहुलियतदरमा ऋण ल्याउनुपर्ने सुझाब […]